RASMI: Barcelona oo ku dhawaaqday inay la saxiixatay Miralem Pjanić - Hargeele - Wararka Somali State
(Spain) 29 Juun 2020. Kooxda Barcelona ayaa fiidnimadan caawa ee isniinta ah ku dhawaaqday inay la soo wareegtay xiddigga qadka dhexe reer Bosnia iyo kooxda Juventus ee Miralem Pjanić.
Kooxda reer Catalonia ayaa war rasmi ah ay soo saartay daqiiqado kahor, waxay ku xaqiijisay inay kala soo saxiixatay Miralem Pjanić naadiga Juventus.
Heshiiskan ayaa ka dhigan in xiddiga heerka caalami xulka qaranka Bosnia ee Miralem Pjanić uu matali doono Blaugrana sanadaha soo socda.
“Barcelona iyo Juventus waxay ka heshiiyeen in Miralem Pjanic uu ugu wareego Barca 60 million euros”.
“Ciyaariyahanku wuxuu saxiixi doonaa heshiis 4 xilli ciyaareed ah, illaa iyo xilli ciyaareedka 2023 – 2024, waxaana qiimaha lagu burburin karo qandaraaskiisa uu gaarayaa 400 milyan euro”.
“Laacibka wuxuu sii joogi doonaa kooxda Juventus, ilaa iyo dhamaadka xilli ciyaareedkan 2019/2020”.
Juventus oo dib ugu soo laabatay hoggaanka Serie A, kaddib markii ay kulankii Derby d’Italia ku garaacday kooxda Inter… +SAWIRRO
RASMI: Xilliga la ciyaari doono Spanish Supercup oo markii ugu horreysay afar kooxood ay ka qeyb qaadanayaan oo la shaaciyay